#ဘယ်လောက်တောင်အားကျလိုက်သလဲဆိုရင်လေ – မြေဇင်း သမထဝိပဿနာ
ဖတ်နေတဲ့ စာအုပ်ကို ဆက်မဖတ် တော့ပဲ လက်ကချပြီး လူက ခုန်ဆွ ခုန်ဆွ နဲ့..ငါဘယ်လို လုပ်ရ မလဲ ငါဘယ်လို လုပ်ရ မလဲ အဲ့လိုဖြစ်ချင်တယ် အဲ့လိုဖြစ်ချင်တာ လက်နှစ်ဘက်ကိုပွတ် လိုက် မျက်နှာ ပြန်အုပ် လိုက်… ထိုင်လိုက် ထ လိုက် ခုန်လိုက်….အိုးးးး… ရိုးတွင်း ချဥ်ဆီ ထဲ ကနေ အဲ့လို ဖြစ်ချင် ခဲ့တာ…စာအုပ်ကို အပြီးထိ ဆက်မဖတ်နိုင် တော့ပဲ.. တဝက်တပျက်နဲ့ အဲ့စာ ထဲက ပါတဲ့…ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေလို မေတ္တာဓာတ်တွေအရမ်းကြီးလိုချင်ရချင်ခဲ့တာပါ… မေတ္တာ ဟာ ဘယ်လောက် တောင် အေးမြသလဲဆိုရင် ဖတ်နေတဲ့သူတောင် ဖတ်ရင်းနဲ့…အအေး ဓာတ်တွေ ကူးပြီး အဲ့ဒလို မေတ္တာစိတ် ပိုင်ရှင်မျိုး…ကို ဖြစ်ချင်ခဲ့ရတာပါ..အာ့နဲ့ပဲ… ဘယ်လို ကျင့် ရတာလဲ အဲ့လို မေတ္တာပိုင်ရှင်မျိုးဖြစ်အောင်… ဆိုပြီး…သိသလောက် ဖတ်ထားသလောက် လက် လှမ်း မှီရာကို မေးမြန်း စူးစမ်းပြီး…စတင် ကျင့်ခဲ့ မိပါတယ်…
#ပထမဆုံးကျင့်တာကအရပ်၁၀မျက်နှာမေတ္တာပို့ကိုထိုင်တဲ့အရိယာပုပ်နဲ့ထိုင်နိုင်သလောက်ထိုင်ပြီး #မျက်စိထဲ သတ္တဝါ တွေပုံ ပေါ်အောင် ဖော်ပြီး မေတ္တာ ပို့ပါ တယ်… ပြီးတော့ စာထဲ မှာ ပါတဲ့ အတိုင်း သတ်သတ် လွတ်စားပါတယ် အဓိဌာန်ကို ၁လလုပ်ပါတယ် (အဲ့တုန်းက အဓိဌာန် ဆိုတာ သေချာ မသိသေးပါ)အဲ့လို တနေ့ကို ၁နာရီ လောက်လေးပဲ #ထိုင်နေစဥ် မေတ္တာ ပို့ဖြစ် ပါတယ်.. #ကျန်အချိန် နေစဥ်အချိန် များမှာတော့ တွေးချင်ရာ တွေးပြီးနေခဲ့ ပါတယ် (မဟာ့ မဟာအမှား ကြီးဆို တာကို ထိုစဥ် ကလုံးဝ လုံးဝမ သိခဲ့ ပါ) အဲ့လို နဲ့ ထိုင် ချိန် ၁နာရီ လုံးလုံး မှာ စိတ်ကလေး အေးလာသလား ပြန်ကြည့်ပါတယ်… (Noပါ) ထိုင်နေချိန် အောက်ကကြမ်းပျဥ်နဲ့ တင်ပါးဖိမိ လို့ ဖြစ်ပေါ် လာတဲ့ ဖောက်ပြန် မှုသဘော ထုံတာ နာတာ ကျဥ်တာ ကိုသာ သိသာလာပြီး စိတ်မှာ ကတော့ ပူတာက ပူနေတာ ပါပဲ..မေတ္တာပို့ နေတဲ့ အချိန် သမာဓိလေး ကောင်းတဲ့အချိန်ခဏလေး လောက် ပို့နေ တဲ့ သတ္တဝါ တွေဆီစိတ် ရောက်သွား တဲ့ အချိန် စက္ကန့်မျှ လောက်လေး သာနေလို့ ကောင်းခဲ့ပါတယ်…။
ဒီလို နဲ့ ရက် ၃၀ အဓိဌာန် ထားတော့ကာ… စအားထုတ်တဲ့ နေ့ထဲကနေ ရင်ထဲမှာ ပူတာတွေက ပိုပို သိသာ လာတာ ခံစား မိလာတယ်… ဟင်းးး မေတ္တာက အေးတယ် ဆို… ငါက မေတ္တာ ပို့ရင်း ပူနေ တာပဲ…. ဘာလို့လဲ မသိ ဘူးဟာ…. ဘယ်လို ပွားရ တာလဲ မသိဘူး…ဟာ…ကျင့်တဲ့ ကျင့်စဥ်ကို သံသရ စတင် ဝင်လာပါပြီ.. မဟုတ်သေးပါဘူး…မေတ္တာ ပို့ရင် အေးတယ် ရေးထား တယ်လေ…မေတ္တာ နဲ့နေတဲ့ ဘုန်းတော် ကြီးတွေ နား တောင် တောရိုင်း တိရိစ္ဆန် တွေ​တောင် လာ တယ်လေ…အေး…. ငါက အဓိဌာန် ဝင်ရင်း ပိုပို ပူလာတယ်…ဘယ်လိုလဲ မသိတော့ ဘူးဟာ… ရက်ပေါင်း (၂၈) ရက် မြောက်နေ့ မှာတော့…ပွဲကြီး ပွဲကောင်း စတင် ပါလေပြီ…ဘာမ ဟုတ်တဲ့… စကားသေးသေးလေးတခွန်းကြောင့်…သတ်မယ်ဖြတ်မယ် အဆင့်ထိ သွေးထွက်သန်ယိုအထိကို ဖြစ်သွား ခဲ့ရ လေသည်…. ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီ ပို၍ သံသရ ကြီးထွားလာကာ…အဓိဌာန်ကို ရပ် လိုက်ပါသည်… #ဒုတိနည်း နဲ့ စမ်းသပ်ပါပြီ…#မေတ္တာသုတ် အခေါက်ရေ နှင့် ရွတ်ပြီးလေ့ကျင့် ပါသည်…(ရွတ်နေ တဲ့အ ချိန်တော အတွင်းတောင် တွေးချင်ရာတွေး သမာဓိမရှိတဲ့ စိတ်အခြေ နဲ့ ရွတ်ခဲ့ပါသည်။)
ပထမ နည်းတူစွာ…. ထိုင်နေစဥ် ရွတ်နေစဥ် အချိန်မှ လွဲ၍ ကျန်ချိန်များ တွင် မိမိ၏စိတ်ကို တွေး ချင်ရာတွေး ပေါက်လွတ်ပဲစား ထားခဲ့ပါသည်။ ထိုနည်းလည်း သက်ဆိုးမရှည်လိုက်ပါ…ဒီလိုနဲ့.. စိတ်ထဲ ဘာခံယူချက် ခံစားချက် ဖြစ်လာ သလဲ ဆိုရင်…အော်… မေတ္တာ ဆိုတာ ပွားနေ ရင် ပိုဒေါ သဖြစ် စရာအာရုံ တွေနဲ့ ပိုကြုံ ရပြီး ပိုပြီး စိတ်ပိုညစ်ရ တာပါ လားလို့… လွှဲမှားစွာ ဆုံးဖြတ်ချက် ချခဲ့ မိလေ သည်။ ငါက အရမ်း အေးချမ်းချင် စိတ်ချမ်း သာချင်တာ……ပါငါ ဘဝမှာ စိတ် ကလေးပျော့ ပျောင်းနူးညံ့ပြီး သတ္တဝါ ကို ချစ်နေ ချင်တာ…အဲ့လိုဖြစ် ချင်တာလေ ဘယ်လို ကျင့် ကျင့် အဲ့အခြေအနေကို မရပဲ…ဒုံရင်း… ဒုံရင်း… ပါပဲလား… ဤသည်ကား…. တရားအားမထုတ် ခင်တုန်းက စာရေး သူ၏ မေတ္တာ ကျင့်စဥ်များ သာတည်း…ဟုတ်ပြီ… တရားရိပ်သာဝင်ပြီ… သင် ခန်းစာ တွေမှာ မေတ္တာ ကမ္မဌာန်း ပါလေသည်… ဟန်ကျသကွယ်… #လိုချင်နေရချင် နေတာကြီး နည်းစနစ် ကျကျပွားနည်းသိရလေပြီ… ပွားတဲ့နေ့က ၁ရက်သာ အချိန် ရလိုက် သည် မို့…ထိထိ မိမိအရသာမသိလိုက်ပါ…(ပွားပုံအသေးစိတ် ကိုယ်တွေ့မှတ်တမ်း စာစုများမှာရေးပေးခဲ့ပေးပြီမို့ ဒီနေရာလေးမှာ မရေးပေးတော့ပါဘူးနော်..)
အိမ်ပြန် ရောက်ပြီ…ဝိပဿနာ ပိုင်းတွင် မြင်လိုက်ရသော…#ပုဂ္ဂိုလ် သတ္တဝါ မရှိ ငါမရှိဖူး ဆိုတာ ကြီးကို…မိမိ ရဲ့ #ဉာဏ်မှာ ကွက်ကွက် ကွင်းကွင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ကြီးထင် သွားခဲ့ ခြင်းဟာ…. စာရေးသူ၏ အရာအားလုံး ၏ ချောဆီ ကြီးကို ရလိုက်ရသလိုပါပဲ..တနည်း… မွေးလာထဲက ယခု ချိန်ထိ ဘယ် အရာမှ လိုတာ မပြည့် ရတာ မလို ဖြစ်နေ ခဲ့တဲ့ စိတ်ဟာ ဆိုရင်ဖြင့်….ရတနာ သိုက် ကြီး စကြ်ာ ယာဥ်ကြီး ကို ရလိုက် သလိုမျိုး ကိုခံစားခဲ့ ရတာပါ.. ဒီ စကား လုံးကို မြင် သာအောင် ပုံဖော်ပြရတာပါ…#တကယ်တော့ နှိုင်းပြစရာစကားကိုရှာလို့ကိုမရခဲ့တာပါ… ထို့ကြောင့်… ဤအသိဉာဏ် စတင်ဝင်ရောက် သွားသည့် နေ့ကစလို့…အပေါ်မှာ စာရေးသူ ကျင့်ခဲ့ ဖူးသော ကျင့်စဥ်တွေဟာ ဆိုရင်ဖြင့်… ဘယ်လိုပြောရမလဲ…ကြိုးမဖြေပဲ လှေလှော်ခဲ့ မိတာပါလား… ဆိုတာကြီးကို မိမိဖာသာ သိရှိ သွားခဲ့ ပါတော့တယ်…အိုးးးးး…. ဟိုးးးးး…အွော….. ငါ…. ငါ… ငါ…. ဒီငါ…. တယ်လဲ ကြောက်ဖို့ ကောင်း တာပါ လား….နော်…သူ… ပါနေ လို့ကို ဘယ် ဟာ ကျင့်ကျင့် ထိပ်ဆုံး မရောက် နေတာ ပါလား… ကွယ်… ဆိုတာ… သိရှိ သွားခဲ့ ရပါ တယ်….ဒီ တော့…#ဘယ်လောက် ထိုင်ထိုင်#ဘယ်လောက် ရွတ်ရွတ်#ကုသိုလ် ရရုံလေး အဆင့် မှလွဲ….မိမိ ရဲ့တကယ့်စိတ်သဏ္ဍန်မှာ မေတ္တာဓာတ် မကိန်းရတာ… ဒါကြောင့်ပါလားလို့ သိလာခဲ့ရ တယ်….။
#ဘာမြင်မြင်#ဘာကြားကြား#ငါမြင်တယ်#ငါကြားတယ်လုပ်နေမှတော့ ဒီစိတ်မဆိုးပဲ ခံနိုင်ပါ့ မ လား…တရား ထိုင်တယ် ဆိုတာတောင် ငါထိုင်တယ် ထင်ထား တာလေ..ဒီ… ငါ… က လက်သည် တရားခံအစစ်ကြီးပါလားဗျားးးးးးးသူ့ခံနေလို့….ကို… အရာအားလုံး ပိတ်ဆို့ ကုန်ရတာ… ဒီတော့.. ..သူ့ကို မရှိမှန်း သိသွားပြီ ဆိုမှတော့…သတ္တဝါ တွေကို မချစ်ပဲ ကိုယ်ချင်းမစာပဲ နေနိုင်ပါ တော့မ လားကွယ်..ချစ်တက် လိုက်တာ ကိုယ်ချင်း စာတက် လိုက်တာ ပြော မနေ ပါနဲ့ တော့..ပျော်လိုက် တာပျော် လိုက်တာ ငါလိုချင်နေ တာဒါပဲ…ခုမှ တကယ် စိတ်ချမ်းသာ တဲ့အဆင့်ကို ရောက်လာပြီ ပဲ…အော်… ဒါကြောင့်…ဆရာတော် ဘုရားကြီး တွေက တရား အားထုတ်ပါ တရားအားထုတ် ကြ ပါ ကွယ်လို့..မေတ္တာအပြည့်နဲ့ပြောကြတာပါလား… ဆိုတာလည်း.. #မေတ္တာကို ခံစား တက်ခံယူ တက် ခဲ့ ရပါ တယ်…အရင် က သည်း ခံ တယ် ဆိုတဲ့ စကား က မနိုင် ဝန်တ ခု ကို ထမ်း ရ သ လို ကျိတ် မှိတ်ပြီး ကျိတ် ခံ ခဲ့ ရ တာ ပါ…ပြော လိုက် မိရင် နောက်ဆက်တွဲတွေ မကောင်းလို့ ဘာလို့ ညာလို့ စတာမျိုး တွေနဲ့ ပြောချင်တာ ကို ပြန်မ ပြောရပဲ မချိ တင်ခဲ နာသာခံခက်ကြီးနဲ့ ကျိတ်ခံရ တဲ့ သည်းခံခြင်းမျိုးကြီး ကို…တသက်လုံး ကျင့်သုံးခဲ့ရတာ ပါလား…..ခုတော့ကြည့်ပါဦး …ဆိုကြ ပါ စို့…မိမိ အိမ်က ကြောင်လေးနဲ့ တခြားအိမ်ကကြောင်လေး ၂ကောင် ကိုက်နေကြ ရင်တောင်… အော်… ဒေါသ…ဒေါသ..တယ်လည်းကြောက်စရာကောင်းလှတာပါလား….နော်(သူတို့ ၏ ဒေါသ ကိုပဲ မြင်ပါတယ်)… (သတ္တဝါ ကို မမြင် တော့ပါ) အရ င်ကလို . အန်မယ်…နင်က…ငါ့ကြောင် ကို လာကိုက်တယ် ဟလား..ဘာညာစသဖြင့် ၂ကောင်ကိုက်ရင်တောင်ငါ… ဆိုတာ ကြီး… ပါ.. နေ တော့…။
ငါ့ကြောင်ကိုက်လို့… ငါပါဒေါသထွက်တယ်… ဟဲ့…ငါ့ကြောင့်ကို မခံစေချင်ဘူး နိုင်စေချင် တယ် .. ဆိုတဲ့… စိတ်တွေ ဖြစ်ခဲ့ရတာကိုး… ခုများတော့….ဘေးကနေ အကြည့် သမားသက်သက် နဲ့ သူ တို့၏ စိတ် မှာ ဖြစ်ပေါ် နေသော ဒေါသ ကိုသာ တန်းမြင် သွားခဲ့ရ တာပါလား…သူ မပါ ငါမပါ အ ကြည့်သမားသက်သက်ဆိုတာ… ဆရာတော် ဘုရားကြီးတွေ ဟောကြားတာ…ဒါကို ပြောတာပါ လား…ဆိုတာ သိသိ လာခဲ့ ပါတယ်…အဲ့လို… တ ငါ ထဲ ငါ နေတဲ့ ငါလေး… မရှိတော့ တာလေးက လွဲလို့ ကျန်တာ အားလုံးကတော့… မြင်တာ ကြားတာ အကုန်တူတူပါပဲ…နှလုံးသွင်း လိုက်တဲ့ အ ခါမှာ… ငါ မပါအောင် နှလုံးသွင်းမိနေမှတော့…ဒီ ဒေါသ တို့ ဘာညာတို့ က လာပါ တော့ မလား… သတိ လွတ်သွား ခဲ့လို့ ဖြစ်ခဲ့ရင်တောင် ချက်ချင်းဖြစ် ချက်ချင်းသိနေတော့.. ဖြစ်ကြောက မရှည် တော့… ဘယ်လောက် အေးလိုက် သလဲ နော်…ဒါကို စောစောစီးစီး က လုံးဝ မသိခဲ့တာ.. ပါဆင်း ရဲ လိုက် တာ ဆင်းရဲ လိုက်တာ ထစ်ခ နဲဆို ဒေါ သက ထွက်ပြီးသား… မာန က ထ ထောင်ပြီး သား…ပြောတော့ မေတ္တာသုတ်ရွတ်တယ် ပြောတော့ သတ်သတ်လွတ်စားပြီး အဓိဌာန်ဝင်တယ်.. ပြောတော့ တရားသမား..ပြောတော့ ရွတ်လိုက် တာ သူ့ အပြင်မရှိ…ထွက်လိုက် ရတဲ့ ဒေါ သ.. ငိုလိုက် ရတဲ့ အငို…. ထိုင်ရာ ကထ လာတာ နဲ့ တအိမ် လုံးကို ပတ် ရန်း ပြီး အော် ဆူ နေ တော့ တယ်..ပြောတော့ ဘုရား တရားအ ကြောင်း…သူ့လောက် သိတာလော ကမှာ ဘယ်သူမှ မရှိ…သူ့ လောက် စိတ် ဆိုး စိတ် ကောက် ဒေါသ ကြီးတဲ့ သူ မရှိ…စသော စသော… အိမ်သား များက ပေး သော comment များသည်ကားးးး…ထိုထို… ငါ… ကြောင့်… သာတည်း… ဆိုတာ… ရိပ်မိ သွားခဲ့ ပါတယ်…ဒီတော့… တလောကလုံး အရေးကြီး ဆုံးဟာ…ငါ… မရှိတာကို သေသေ ချာချာ သိရေး ကသာအရေးတက အရေးအကြီးဆုံးကြီးပါတကား….လို့… သိသွားခဲ့ရပါတော့တယ်။
#အဖွဲ့အစည်းတခုမှာမေတ္တာမပါရင်ရေရှည်မတည်တံ့ပါ#မိသားစုဘဝလုံခြုံပြည့်စုံရေးမှာမေတ္တာမပါရင်ရေရှည်မတည်တံ့ပါ#တလောကလုံးမှာရှိရှိသမျှအရာအားလုံးသည်#မေတ္တာဆိုတဲ့ချောဆီမပါရင်ဘယ်တော့မှရေရှည်မတည်မြဲပါ..#မေတ္တာသည်ကုသိုလ်အားလုံး၏#ခေါင်းဆောင်ပါ..#မေတ္တာစစ်မေတ္တာမှန်ဖြစ်ဖို့အတွက်တကြောင်းတည်းသောလမ်းသည်#ကိုယ်ချင်းစာတရားပါ..#မေတ္တာဆောင်ရင်အရာရာအောင်ပါသည်။#မေတ္တာများများပွားပို့နေခြင်းထက်ကြီးမားသောဒါနမရှိတော့ပြီ..ဒေါသ ဖြစ်မယ် ကြံတိုင်း ပြန်ပြန် ဖတ်မိ စေရန် ရည် ရွယ်၍ ရေးသားလိုက်ရပါသည်။
စာရေးသူ ကတော့ ခုချိန်မှာ ဆိုရင် ဖြင့် အပေါ်ဆုံး က ရေးခဲ့ သလို ထခုန် ခဲ့တဲ့ အလွန် ရချင် ခဲ့တဲ့ ဆုလာဒ်ကြီး ကို ဖြင့်..ထခုန်စရာ မလိုတော့ရ လောက်အောင်..ရင်ဝယ်ပီတိလွန်စွာဖြစ်၍ မြင်မြင် သမျှ ချစ်မဝ မြင်မြင် သမျှ ကိုယ်ချင်း စာမိမြင်မြင်သမျှ သနား​ကြင်နာမိ..မေတ္တာတွေနဲ့ ပြည့်နက် နေပါ တော့၏… မေတ္တာတကယ် ဝင်ရင်ချစ်တက် လာပါတယ်… ဒါဆို…မချစ် တက်သေး တာ…. တကယ် အေးချမ်းချင်ရင်… တကယ် သိတယ်ဆိုရင် မိမိ ကိုယ်ကိုအရင်ချစ်တက်ဖို့ဆိုတာမိမိစိတ်မှာ ကပ်ငြိလာတဲ့လော၊ ဒေါ၊မောစသောကိလေသာတွေ ကိုဖယ်ရှားပေးနေမှသာတကယ်ချစ်ရာရောက်ပါတယ်..ပြိုင်ချင်တာမနာလိုဝန်တိုဖြစ်တာမာန်မာနကြီးတာစတာတွေဟာ ကိလေသာတွေကြီးပါပဲ.. ဒီတော့…ကိလေသာကို ချစ်နေသမျှ မိမိကိုယ် ကို တကယ် မချစ်တက်သေးပါမိမိကိုယ်ကို မှ မချစ် တက်သေးရင် သူတပါး တွေကို ချစ်တက်ပါ တော့မလား စာရေးသူက အဲ့ဒီ စရင်းထဲ ထိပ်ဆုံး က ပါခဲ့သူ ကြီးပါ…(အရင်က) မိမိကိုယ် ကို ရေခဲတုံးဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ခြင်းက ရေခဲအငွေ့အသက်ကိုခံရခြင်းထက်ပို၍ အရသာရှိလှပါ တယ်..မေတ္တာ ကြီးမားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး တွေနားကပ်လိုက်ရင် အေးတဲ့အရသာ ခံစားရတာ မေတ္တာ ဓာတ် ကြောင့်ပါ ဒေါသဖြစ်တဲ့ သူဟာ မီးကို ကိုင်ပြီး ပေါက်တဲ့ သူနဲ့ တူနေတာမို့ကိုင်တဲ့သူလည်း ပိုပူရသလိုအပေါက်ခံရတဲ့သူလည်းပူရပါတယ်..ငါဒေါသထွက်တာဘယ်သူ့ထိခိုက်လို့လဲဆိုတဲ့စကား…သေချာသိလာတော့… ။
ကိုယ်ချင်းစာ မိခဲ့ လေပြီ..တလော ကလုံး မြူမှုန် လေးတ မှုန်လောက် ကအစ အရာရာ ထိစပ်နေ တာပါ….မိမိ ကိုယ်ကို ပျက်စီး အောင်လုပ် ခြ င်းဟာ တလော က လုံးကို ဖြတ်စီး လိုက် တာ ပါ… ငါ့ဖာသာ စိတ်ဆိုး တာဘာ ဖြစ်သလဲ ဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီ ငါနဲ့ထိစပ်နေတဲ့အရာအားလုံးကို မီးနဲ့ရှို့ လိုက်ပါပြီ.. မိမိကိုယ်ကို စောင့်ရှောက်ခြင်းသည် တလောကလုံးကို စောင့်ရှောက် ခြင်း မည်၏ ထို့ကြောင့် လူသားတိုင်း တရား အားထုတ်ခြင်း ဖြင့်လောကကြီး ကို အလှဆင်ကြပါစို့ ယောဂီအပေါင်းတို့…. စကားချက်။။
တရား အားထုတ် ခြင်းသည် ထိုင်မှ အား ထုတ်ရ မည်မဟုတ် နေစဥ် အချိန်တိုင်းမှာ သတိကပ်၍ အားထုတ်နေ ရပါ သည်။ ဤသည်ကား တရား ရကြောင်း ၏ အားကြီးသော အထောက် အပံ့ပေ တည်း တရားအားမထုတ် နေသည့် အချိန်မတရား ဖြစ်နေပါသည်။ မိမိတို့ အားသန် ရာ ဘာဝ နာ တခုခုဖြင့် နေစဥ် အချိန်များ ကို ပွားများ နေရ ပါသည်။ယောဂီ အားလုံး တရားတွေ့ ချမ်းမြေ့ ကြ ပါစေရှင်
Nippon San(Facebook မှ ကူယူ ဖော်ပြ ပါသည်။)